obsessive-compulsive disorder တွင်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာပြulsနာများ - ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်ရောဂါများ (2019) - Brain On Porn On
J ကိုပြုမူနေစွဲ။ 2019 မေလ 13: 1-7 ။ Doi: 10.1556 / 2006.8.2019.23 ။
မြောက်မြားစွာအသုံးအနှုန်းများ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, hypersexuality, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse နှင့်ထကြွလွယ်သော-compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပါအဝင်အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ, ဖော်ပြရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ "Out-of-ထိန်းချုပ်မှု" ဟု compulsive အဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ထကြွလွယ်သောရောဂါ (အဖြစ် "စွဲ" အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ labeling အကြောင်းကိုဆက်လက်အငြင်းပွားဖွယ်ရာရှိနေပါသည်Bőthe, Bartók, et al ။ , 2018; Bőthe, Tóth-Király, et al ။ , 2018; Carnes, 1983, 1991; Fuss et al ။ , 2019; Gola & Potenza, 2018; Grant et al ။ , 2014; Griffiths က, 2016; Kraus, Voon, & Potenza, 2016; Potenza, Gola, Voon, Kor, & Kraus, 2017; Stein, 2008; Stein, Black, & Pienaar, 2000) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ရောဂါရှာဖွေလက်စွဲသို့အခြေအနေကို၏ပါဝင်မှုများအတွက်သိပ္ပံနည်းကျထောက်ခံမှုရှိနေသော်လည်းကိုလည်းကြောင့်, ဘာသာရေး moralistic, ဒါမှမဟုတ်လိင်-အနုတ်လက္ခဏာသဘောထားများ (ရန်ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ရောဂါဗေဒ၏အန္တရာယ်အပေါ်အခြေခံပြီး, ဒီဆန့်ကျင်သိသိသာသာထောက်ခံအားပေးမှုရှိခဲ့Fuss et al ။ , 2019; စာနယ်ဇင်းအတွက် Klein, Briken, Schröder, & Fuss) ။ ၏ပဉ္စမထုတ်ဝေသို့ hypersexual ရောဂါများ၏ပါဝင်မှုများအတွက်အမှန်မှာထိုအဆိုပြုချက်ကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် (DSM-5; Kafka, 2010) (Trustees ၏အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း (ယား) ဘုတ်အဖွဲ့ကငြင်းပယ်ခဲ့သည်Kafka, 2014) ။ ၏ 11th တည်းဖြတ်မူအတွက်အရင်းခံတွန်းအား-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ (CSBD) ၏ပါဝင် ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာစာရင်းအင်းအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ (ICD-11) (2019 အတွက်တာဝန်ရှိသူတဦးကသဘောတူညီချက်ရေးထိုးများအတွက်ကြောင့်Kraus et al ။ , 2018).
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြောင့်ရောဂါတရားဝင်လက်ခံထားသောရောဂါရှာဖွေစံ၏မရှိခြင်းနှင့်အတည်ပြုအဖြေရှာတဲ့တူရိယာ၏မရှိခြင်း ပတ်သက်. အငြင်းပွားဖွယ်ရာရန်, CSBD အပေါ်အနည်းငယ်တိကျခိုင်မာစွာ epidemiological လေ့လာမှုများထွက်သယ်ဆောင်ပြီ။ ဤဆောင်းပါးတွင်တှငျကြှနျုပျတို့, လူမှုရေး, ပုဂ္ဂိုလ်ရေး, မိသားစုအတွက်သိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းဖြစ်ပေါ်စေသည်တစ်ခုတိုးချဲ့ကာလအတွင်းထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ရရှိလာတဲ့, ပြင်းထန်သောထပ်တလဲလဲဖော်ပြသော, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulses သတင်းပို့ထိန်းချုပ်ဖို့သို့မဟုတ်တိုကျတှနျးထားရန်ပျက်ကွက်တဲ့ဇွဲပုံစံဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုခွအေနအေအဖြစ် CSBD ရည်ညွှန်း ပညာရေးလုပ်ငန်းခွင်, ဒါမှမဟုတ် functioning ၏အခြားအရေးကြီးသောဒေသများ (Kraus et al ။ , 2018) ။ ဒါဟာ (ယေဘုယျလူဦးရေရဲ့ 5% -6% ကိုရောဂါကြောင့်ထိခိုက်စေခြင်းငှါခန့်မှန်းခြေထားပြီးCarnes, 1991; Coleman, 1992); သို့သော်မကြာသေးမီကကိုယ်စားလှယ်လေ့လာမှု, အခက်အခဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနှင့်ဆက်စပ်ဒုက္ခဆင်းရဲပင်ပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းကိုတွေ့တိုကျတှနျးထား, နှင့်အမေရိကန် (အတွင်းအပြုအမူတွေကိုDickenson, Coleman, & Miner က, 2018) ။ အရေးကြီးတာကအဲဒီပျံ့နှံ့ခန့်မှန်းချက် (ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အတည်ပြုလုပ်ငန်းလည်ပတ်စံသုံးပြီးကြောင့်သုတေသနတစ်ခုမရှိခြင်းဖို့ပိုမိုမှန်းဆဖြစ်နိုင်သည်Klein, Rettenberger, & Briken, 2014).
CSBD နှင့်အတူလူနာအများအား (compulsive အပြုအမူတွေ, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုအခက်အခဲများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့Derbyshire & Grant က, 2015) ။ ဤအ comorbidities မှအာရုံစူးစိုက်မှုနောက်ဆုံးမှာ compulsive, Impulse, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုစွဲသကဲ့သို့ Out-of-ထိန်းချုပ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏စိတ်ကူးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှု Impulse ဖို့စပ်လျဉ်း (အားကောင်းခဲ့စဉ် Impulse နှင့် compulsive နှစ်ဦးစလုံး, "Out-of-control" ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့Bőthe, Tóth-Király, et al ။ , 2018) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, "Out-of-control" ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် compulsive အကြားဆက်ဆံရေးထပ်တလဲလဲ (အကြံပြုထားသည်Carnes, 1983, 1991; Coleman, 1991; Stein, 2008) နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ရပ်အထပ်ထပ်နှင့်ကွပ်မျက်စဉ်အတွင်းလွှတ်ရာတစ်နည်းအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်အပြုအမူမတိုင်မီတင်းမာမှုတစ်ဦးမြင့်တက်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်။ အကျိုးဆက်ဟူသောဝေါဟာရကို အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ (ICD-11 များအတွက်လည်ပတ်အတွက်ဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ပြဿနာများအားဖြင့်လိုက်ပါသွားကြသည်ဟု "Out-of-control" ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေများအတွက်အဆိုပြုပြီးပါပြီKraus et al ။ , 2018) ။ သို့သော်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါ (OCD), အ paradigmatic compulsive ရောဂါအတွက် CSBD ၏အတော်လေးနည်းနည်းစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရှိခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ CSBD နှင့် OCD ၏ comorbidity အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ OCD ၏ပျံ့နှံ့ယခင်က% 2.3 မှ 14% ကနေအထိပျံ့နှံ့နှုန်းနှင့်အတူ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူလူများ၏လက်တွေ့နှင့် Non-လက်တွေ့နမူနာအတွက်အကဲဖြတ်ထားသည်ပေမယ့် (Black, Kehrberg, Flumerfelt, & Schlosser, 1997; က de Tubino Scanavino et al ။ , 2013; Morgenstern et al ။ , 2011; ရေမွန်, Coleman, & Miner, 2003), ဒီ OCD လူနာနှင့်၎င်း၏ဆက်စပ် sociodemographic နှင့်လက်တွေ့ features တွေအတွက် CSBD ၏ပျံ့နှံ့အကဲဖြတ်ရန်ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောသတင်းအချက်အလက်ဆေးခန်းအသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်ကိုလည်း CSBD ၏စိတ်ကူးအတွက်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
ဇန်နဝါရီလ 2000 နှင့်ဒီဇင်ဘာလ 2017 အကြားစုဆောင်းလက်ရှိ OCD နှင့်အတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူပြင်ပလူနာကဒီလေ့လာမှုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူခဲ့ပါတယ်။ အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်စေရန်, လူနာ DSM-IV (DSM ၏စတုတ္ထထုတ်ဝေဖြည့်ဆည်းခဲ့ရသည်; ယား, 2000) ကိုပေါ် OCD တစ်မူလတန်းရောဂါများအတွက်သတ်မှတ်ချက် Diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲ, စတုတ္ထ Edition ကို, ဝင်ရိုးတန်းငါ Disorders-လူနာဗားရှင်းများအတွက်စနစ်တကျလက်တွေ့အင်တာဗျူး (SCID-I / P ကို; ပထမ ဦး စွာ Spitzer, Gobbon, & Williams, 1998) ။ စိတ်ပညာ၏သမိုင်းတစ်ခုဖယ်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ လက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်တစ် ဦး သို့မဟုတ် OCD ကျွမ်းကျင်မှုရှိသောအခြားစိတ်ရောဂါဆရာ ၀ န်တစ် ဦး အားအရင်းအမြစ်အမျိုးမျိုး (ဥပမာ - တောင်အာဖရိကရှိ OCD အသင်းနှင့်လူထုအခြေပြုမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများ) မှရည်ညွှန်းထားသောလူနာများအားတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။
အဆိုပါ Semi-ဖွဲ့စည်းပုံမှာအင်တာဗျူးလက်ရှိအသက်, လူမျိုးနှင့် OCD ၏စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်အပါအဝင်တိကျတဲ့လူဦးရေအချိုးအစားနှင့်လက်တွေ့အချက်အလက်ပေါ်မေးခွန်းများကိုလည်းပါဝင်သည်။ ခံစားချက်, စိုးရိမ်စိတ်, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း, မရွေး somatoform နှင့်အစာစားခြင်းမမှန်မှုများအပါအဝင်လက်တွေ့ diagnoses သည်, SCID-I / P ကိုအတူရရှိသောဒေတာများအပေါ်မှာအခြေခံခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် obsessive-compulsive Spectrum Disorders များအတွက်စနစ်တကျလက်တွေ့အင်တာဗျူး (OCSDs) (SCID-OCSD; du Toit, ဗန် Kradenburg, Niehaus, & Stein, 2001) Tourette ၏ရောဂါနှင့် DSM-IV စိတ်ကြွထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာရောဂါများဖြစ်သော Tourette ၏ရောဂါ၊ အတင်းအကျပ်စျေးဝယ်ခြင်း၊ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း၊ kleptomania၊ pyromania၊ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပေါက်ကွဲစေသောရောဂါ (IED)၊ ] ။ လက်ရှိ CSBD ကိုပါဝင်သူများကအောက်ဖော်ပြပါစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အတိတ်နှင့် / သို့မဟုတ်ရှေ့မှောက်တွင်ပါဝင်သူများကအောက်ပါသတ်မှတ်ချက်အားလုံးနှင့်ကိုက်ညီသည့်အခါတစ်သက်တာ CSBD ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် -
- အနည်းဆုံးအား6လ, မှုများထပ်တလဲလဲထိန်းချုပ်ရန်ပျက်ကွက်တဲ့ပုံစံ, ပြင်းထန်သောလိင်နှိုးဆွသောစိတ်ကူးယဉ်, သွေးသားဆန္ဒရမ္မက်, ဒါမှမဟုတ် paraphilia ၏အဓိပ္ပါယ်အောက်မှာလဲကြမအပြုအမူတွေကိုတစ်ဦးကျြောကာလအတှငျး။
- အဆိုပါစိတ်ကူးယဉ်, သွေးသားဆန္ဒရမ္မက်, ဒါမှမဟုတ်အပြုအမူတွေဆေးခန်းသိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းလူမှုရေး, လုပ်ငန်းခွင်အတွက်, ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကအခြားအရေးကြီးသောဒေသများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
- အခြားရောဂါများ (ဥပမာ - manic episodium, လှည့်စားသောရောဂါ: erotomanic subtype) ကြောင့်အဆိုပါရောဂါလက္ခဏာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာမှတ်ယူခြင်းမရှိပါ။
- ရောဂါလက္ခဏာများသည် ၀ တ္ထုတစ်ခု၏တိုက်ရိုက်ဇီဝကမ္မသက်ရောက်မှု (ဥပမာ - အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်ဆေးဝါး) သို့မဟုတ်အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေကြောင့်မဟုတ်ပါ။
အဆိုပါ ယေးလ်-Brown က obsessive-compulsive စကေး (YBOCS) လက္ခဏာစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းနှင့်ပြင်းထန်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်စကေး (obsessive-compulsive လက္ခဏာတွေ၏ typology နှင့်ပြင်းထန်မှုအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်Goodman, စျေး, Rasmussen, Mazure, Delgado, et al ။ , 1989; Goodman, စျေး, Rasmussen, Mazure, Fleischmann, et al ။ , 1989).
Univariate ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း IBM က SPSS စာရင်းအင်း 22.0 (IBM ကကော်ပိုရေးရှင်း, Armonk, နယူးယော့, USA) ကို အသုံးပြု. ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ χ2 နှင့် Fisher ၏အတိအကျစမ်းသပ်မှုများ, သင့်လျော်သောအဖြစ်, CSBD အပါအဝင် OCSDs ၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်း, OCD နှင့်အတူယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းလူနာအကြားနှင့်အင်တာဗျူးကာလအတွင်းအကဲဖြတ်အဖြစ်အားလုံးသောရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းနှုန်းကိုနှိုင်းယှဉ်ရန် (ဥပမာ Tourette ရဲ့ syndrome ရောဂါ, hypochondriasis, ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခို), ခဲ့ကြသည် မူးယစ်ဆေးဝါးလောင်းကစားခြင်း၊ kleptomania၊ pyromania, IED, agoraphobia နှင့်အတူထိတ်လန့်ရောဂါ, agoraphobia မပါဘဲထိတ်လန့်ရောဂါ, panic ၏သမိုင်းမပါဘဲ agoraphobia, လူမှုရေး phobia, CSBD နှင့်အတူနှင့်မပါဘဲ OCD လူနာအကြားတိကျတဲ့ phobia, စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ, anorexia nervosa, bulimia nervosa နှင့် Self- ဒဏ်ရာအပြုအမူ) ။ ကျောင်းသားရဲ့ t-tests, အသက်နှိုင်းယှဉ်ဖို့ဖျော်ဖြေ OCD ၏စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်နှင့် YBOCS CSBD နှင့်မပါဘဲ OCD လူနာကြားကဂိုးသွင်းခဲ့သည်။ စာရင်းအင်းအရေးပါမှုမှာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည် p <.05
အဆိုပါလေ့လာမှုလုပျထုံးလုပျနညျးဟယ်လ်စင်ကီ၏ကြေညာစာတမ်းနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ Stellenbosch တက္ကသိုလ်များ၏အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်ဘုတ်အဖွဲ့ (Stellenbosch တက္ကသိုလ်ကနျြးမာရေးသုတေသနကျင့်ဝတ်ကော်မတီမှကိုးကားစရာ 99 / 013) ကိုလေ့လာမှုအတည်ပြုခဲ့သည်။ အားလုံးဘာသာရပ်များလေ့လာမှုအပေါင်းတို့နှင့်တကွပေးအသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့် ပတ်သက်. အသိပေးခံခဲ့ရသည်။
လက်ရှိ OCD နှင့်အတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူပြင်ပလူနာ (N = 539; အသက် (၁၈) နှစ်မှ (၇၅) နှစ်အကြားယောက်ျားလေး ၂၆၀ နှင့်အမျိုးသမီး ၂၇၉ ဦး တို့ရှိသည်။ SD = 11.8 နှစ်က), ဒီလေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ခဲ့။ တစ်သက်တာ CSBD ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းသည် ၅.၆% ရှိသည်။n = 30) လက်ရှိ OCD နှင့်အတူလူနာ၌တည်၏။ အထီးလူနာများတွင်အမျိုးသမီးလူနာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်သက်တာပျံ့နှံ့မှုသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်2(1) = 10.3, p = .001; ဇယား 1] ။ ယေဘုယျအား 3.3% (n = 18) နမူနာ၏လက်ရှိ CSBD သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ တနည်းကား, ဒီအထီးလူနာ [χ] နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အထီးသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်2(1) = 6.5, p = .011; ဇယား 1].
စားပွဲတင် 1 ။ တစ်သက်တာပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် CSBD ၏လက်ရှိပျံ့နှံ့နှုန်းတစ်သက်တာ OCD နှင့်အတူလူနာအခြားချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်နှိုင်းယှဉ်
တစ်သက်တာ diagnoses [n (%)]
လက်ရှိ diagnoses [n (%)]
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း5(0.9)5(1.9)0000
မှတ်စု။ CSBD: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ; OCD: obsessive-compulsive ရောဂါ; IED: ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပေါက်ကွဲရောဂါ။
CSBD IED ပြီးနောက် OCD နှင့်အတူလူနာကဒီဆောင်များတွင်အတွက်အကဲဖြတ်ဒုတိယအများဆုံးပျံ့နှံ့ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါဖြစ်ခဲ့သည်။ (ICD-11 အတွက် Impulse Control ကို Disorders အတွက် Cross-စာရင်းဝင်သော) အခြားချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုပုံမမှန်ခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကိုလည်းဇယားတွင်ဖော်ပြပါရှိသည် 1။ CSBD မပါဘဲ OCD လူနာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် CSBD နှင့်အတူ OCD လူနာလက်ရှိ YBOCS ဂိုးသွင်းနှိုင်းယှဉ်အသက်, OCD ၏စတင်ခြင်း၏အသက်, အဖြစ်တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ပညာရေးနှင့်လူမျိုးစု (စားပွဲတင်အစီရင်ခံတင်ပြ 2).
စားပွဲတင်2။ ဒေသစစ်တမ်းများနှင့် CSBD နှင့်မပါဘဲ OCD လူနာလက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများ
CSBD နှင့်အတူလူနာ [n = ၃၀ (၅.၆%)]
CSBD မပါဘဲလူနာ [n = ၃၀ (၅.၆%)]
အသက် (ဆိုလိုသည်±± SD; နှစျ) 33.9 ± 9.8 34.8 ± 11.9 0.4 .7
OCD စတင်ခြင်းအသက် (ဆိုလို±။ SD; နှစျ) 15.5 ± 7.6 17.5 ± 9.9 1.1 .3
YBOCS ရမှတ် (ဆိုလို± SD) 21.4 ± 8.0 20.7 ± 7.3 -0.4 .7
ပညာရေး၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိ [n (%)]
သာကျောင်းကပညာရေး 15 (50%) 212 (42%) 0.8 .4
post-ကျောင်းမှပညာရေး 15 (50%) 297 (58%)
မှတ်စု။ SD က: စံသွေဖည်; CSBD: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ; OCD: obsessive-compulsive ရောဂါ; YBOCS: ယေးလ်-Brown က obsessive-compulsive စကေး။
CSBD နှင့်တစ်သက်တာမရှိဘဲလူနာများအတွက် comorbid မမှန်များအတွက်ပျံ့နှံ့နှုန်းဇယားတွင်ဖော်ပြပါရှိသည် 3။ အရေးကြီးတာက, Tourette ရဲ့ syndrome ရောဂါ, hypochondriasis, kleptomania, စိတ်ကြွရောဂါ, compulsive စျေးဝယ်, IED နှင့် dysthymia3အထက်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချမှုကြားကာလနှင့်အတူ 1 အထက်တွင်တစ်ခုလေးသာမှုအချိုးအစားရှိခဲ့ပါတယ်။
စားပွဲတင်3။ နှင့် CSBD မပါဘဲ OCD လူနာ comorbid မမှန်၏တစ်သက်တာပျံ့နှံ့နှုန်း
CSBD နှင့်အတူလူနာ [n (%)]
CSBD မပါဘဲလူနာ [n (%)]
& Odds အချိုး [CI]
Tourette ရဲ့ syndrome ရောဂါ4(13.3)7(1.4) .002 11.0 [3.0-40.1]
Hypochondriasis5(16.7) 11 (2.2) 20.7 <.001 9.1 [2.9-28.1]
Kleptomania5(16.7) 17 (3.3) 12.9 <.001 5.8 [2.0-17.0]
စိတ်ကြွရောဂါ4(13.3) 15 (2.9) .017 5.1 [1.6-16.3]
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း 1 (3.3)4(0.8) .250 4.4 [0.5-40.2]
compulsive စျေးဝယ်6(20.0) 28 (5.5) 10.1 .002 4.3 [1.6-11.4]
IED 10 (33.3) 60 (11.8) 11.6 .001 3.77 [1.7-8.4]
Dysthymia 10 (33.3) 72 (14.1) 8.1 .004 3.0 [1.4-6.7]
အရက်အလွဲသုံးစားမှု5(16.7) 33 (6.5) 4.5 .034 2.9 [1.0-8.0]
agoraphobia မရှိဘဲထိတ်လန့်ခြင်းရောဂါ3(10.0) 19 (3.7) .120 2.9 [0.8-10.3]
အရက်မှီခို2(6.6) 14 (2.8) .220 2.5 [0.5-11.7]
self-ခြင်းသည်အကျိုးပျက်စေသောအပြုအမူ 8 (26.7) 66 (13.0) 4.5 .034 2.4 [1.0-5.7]
agoraphobia နှင့်အတူထိတ်လန့်ခြင်းရောဂါ5(16.7) 39 (7.7) 3.1 .080 2.4 [(0.9-6.6]
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအလွဲသုံးစားမှု 1 (3.3)3(0.6) .210 2.4 [0.5-10.8]
post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ3(10.0) 23 (4.5) .170 2.3 [0.7-8.3]
Bulimia nervosa3(10.0) 25 (4.9) .200 2.2 [0.6-7.6]
ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခို 1 (3.3) 11 (2.2) .500 1.6 [0.2-12.5]
လူမှု phobia4(13.3) 52 (10.2) .540 1.4 [0.5-4.0]
တိကျတဲ့ phobia5(16.7) 70 (13.8) .650 1.3 [0.5-3.4]
ဗိုလ်မှူးစိတ်ကျရောဂါရောဂါ 21 (70.0) 320 (62.9) 0.6 .430 1.2 [0.7-2.2]
Anorexia nervosa 1 (3.3) 27 (5.3) 1.000 0.6 [0.8-4.7]
ထိတ်လန့်ရောဂါမရှိဘဲ Agoraphobia05 (1.0) 1.000 -
မှတ်စု။ CSBD: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ; IED: ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပေါက်ကွဲရောဂါ; OCD: obsessive-compulsive ရောဂါ; CI: ယုံကြည်မှုကြားကာလ။
ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ OCD နှင့်အတူလူနာအတွက်ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် CSBD ၏ဆက်စပ် sociodemographic နှင့်လက်တွေ့ features တွေစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးစွာကျနော်တို့ OCD နှင့်အတူလူနာ 3.3% လက်ရှိ CSBD နှင့် 5.6% အမျိုးသမီးထက်အမျိုးသားများတွင်တစ်ဦးသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားပျံ့နှံ့အတူတစ်သက်တာ CSBD ရှိခဲ့ဖူးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယအကျနော်တို့ကတခြားအခြေအနေများ, အထူးသဖြင့်ခံစားချက်, obsessive-compulsive နှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ပုံမမှန်သို့မဟုတ်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုပိုပြီး CSBD မရှိဘဲသူတို့အားထက် CSBD နှင့်အတူ OCD လူနာအတွက်ဘုံ, ဒါပေမယ့်မရကြ၏။ တှေ့ရှိ
Carnes (ပေး CSBD ၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်း၏အစောပိုင်းခန့်မှန်းချက်1991) နှင့် Coleman (1992) သည်ယေဘုယျအားဖြင့်လူဦးရေကနေလူဦးအထိ 6% compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထံမှခံရသည်ဟုအကြံပြုခဲ့သည်။ ဤခန့်မှန်းချက်ရယူခဲ့ကြသည်ကိုမည်သို့ရှင်းလင်းပေမဲ့ (အနက်ရောင်, 2000), နောက်ဆက်တွဲ epidemiological သုတေသန (တိုးလာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကြိမ်ရေ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အရေအတွက်နှင့် extramarital ရေးရာပါဝင်သည်ရသော compulsive လိင်, အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်ဘုံကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်Dickenson et al ။ , 2018) ။ OCD အတွက် CSBD ၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းပေါ်မှာငါတို့တွေ့ရှိချက် (ယေဘုယျလူဦးရေအတွက်သူတို့အားအကြမ်းဖျင်းနှိုင်းယှဉ်ပုံပေါ်Langstrom & Hanson, 2006; Odlaug et al ။ , 2013; Skegg, Nada-Raja, Dickson, & Paul, 2010) ။ သို့သော် CSBD ၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ကောက်ချက်ပျံ့နှံ့နှုန်း sociocultural အချက်များကြောင့်ထိခိုက်စေခြင်းငှါဖြစ်သောကြောင့်သတိနဲ့ရေးဆွဲရမည်ဖြစ်သည်ဒါလူဦးရေကိုဖြတ်ပြီးကွဲပြားလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အထီးစစ်ရေးစစ်ပြန်များတို့တွင်လက်ရှိ CSBD နှုန်းအများကြီးပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ဟန် (16.7%) United States မှာစိတ်ရောဂါဝေဒနာရှင် (4.4%) နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများက (3%) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ CSBD များအတွက်တူညီအင်တာဗျူးကို အသုံးပြု. (Grant, Levine, Kim, & Potenza, 2005; Odlaug et al ။ , 2013; Smith et al ။ , 2014) ။ ထို့အပြင် CSBD ကိုအကဲဖြတ်ရန်ကွဲပြားခြားနားသောအတိုင်းအတာများနှင့်တည်ဆောက်ပုံ၏လည်ပတ်မှုအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ ရလဒ်များ၏နှိုင်းယှဉ်မှုကိုကန့်သတ်သည်။ ဥပမာ Jaisoorya et al ။ (2003) (OCD နှင့်အတူလူနာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အပါအဝင် comorbidity () ကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ DSM-IV စံအပေါ်အခြေခံပြီးချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန် detect လုပ်ဖို့နဲ့ self-ဒီဇိုင်းအတိုင်းအရှည်ကိုအသုံးပြုn = 231) နှင့်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များ (n အိန္ဒိယလူ ဦး ရေအတွက် = 200) ။ သူတို့ကတွေ့ရှိခဲ့တာကဘာသာရပ်တစ်ခုတည်းက (CSBD နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်မဖြစ်နိုင်သည်) သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုများတစ်သက်တာပျံ့နှံ့နေသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။
ငါတို့သည်လည်းအများအပြား comorbidities CSBD မရှိဘဲသူတို့အားထက် CSBD နှင့်အတူ OCD လူနာများတွင်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုအခက်အခဲများနှင့်အတူလေးမမှန်, အမည်ရ IED, Tourette ရဲ့ syndrome ရောဂါ, kleptomania နှင့် compulsive စျေးဝယ်, CSBD မရှိဘဲသူတို့အားနှိုင်းယှဉ် CSBD နှင့်အတူ OCD လူနာများတွင်ပိုမိုပျံ့နှံ့ခဲ့ကြသည်။ ထိုအပုံမမှန်ခြင်း၏တစ်သက်တာပျံ့နှံ့လည်း CSBD လူနာမှာသူတို့ရဲ့ပျံ့နှံ့လေ့လာနေသည်အခြားအစီရင်ခံစာများ (ထက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့Black က et al ။ , 1997; Raymond et al ။ , 2003), နှစ်ဦးစလုံးရောဂါနှင့်အတူလူအတွက်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်တစ်ဦးထက်ပိုသိသာချို့ယွင်းညွှန်း, ထို CSBD နှင့် OCD ဖြစ်ပါတယ်။ လုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားများ OCD နှင့် Tourette ရဲ့ syndrome ရောဂါအချို့ကိုပုံစံများကို (အကြားမျိုးရိုးဗီဇဆက်ဆံရေးမျိုးကို support ကတည်းကPauls, Leckman, Towbin, Zahner, & Cohen, 1986; Pauls, Towbin, Leckman, Zahner, & Cohen, 1986; Swain, Scahill, Lombroso, King, & Leckman, 2007), ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာကိုလည်း (ထိုတူညီသောမျိုးဗီဇသို့မဟုတ် neurobiological ညွှန်ပြစေခြင်းငှါStein, Hugo, Oosthuizen, Hawkridge, & van Heerden, 2000) အချက်များ CSBD မှတစ်ဦးချင်းစီကိုလည်း predispose လိမ့်မည်။ ငါတို့သည်လည်း CSBD CSBD (ထဲမှာ comorbidities အကြောင်းကိုအစောပိုင်းအစီရင်ခံစာများအလွန် OCD လူနာအတွက်အထူးသဖြင့် dysthymia နှင့်စိတ်ကြွရောဂါ, ခံစားချက်မမှန်၏မြင့်မားသောတစ်သက်တာပျံ့နှံ့တွေ့ရှိခဲ့Raymond et al ။ , 2003) ။ ဒါဟာ (အချို့လူတွေကစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အပျက်သဘောခံစားချက်တွေကိုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုအသုံးပြုဖို့သတိပြုပါရန်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ပါသည်Folkman, Chesney, Pollack, & Phillips, 1992) ။ ထို့ကြောင့် CSBD သာအချို့သောလူနာအားဖြင့်စိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်းများအတွက်အသုံးပြုမရစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်လည်း CSBD နှင့်ဆက်စပ်ဒုက္ခဆင်းရဲကြောင့်ချို့ယွင်းခံစားချက်တစ်ခုအကြောင်းမရှိပေမည်။ Kafka (2010) (အချို့ hypomanic ဖြစ်စဉ်များ4ရက်ပေါင်းထက်သိသိသာသာပိုတိုကြာရှည်ဟန်ကြောင်းအစောပိုင်းကမှတ်ချက်ပြုBenazzi, 2001; Judd & Akiskal, 2003), အခင်းကျင်းပြသလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတကယ်တော့စိတ်ကြွရောဂါ၏လက္ခဏာအခါ subthreshold အမှုပေါင်းမဟုတ်မမှန် CSBD နှင့်အတူခွဲခြားစေခြင်းငှါဒါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာ Clinician စိတ်ကြွရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက် CSBD ဖော်ထုတ်အတွက်သတိထားဖြစ်သင့်တဲ့အမြင်နှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ ငါတို့သည်လည်းအခြားစိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive-ဆက်စပ်ရောဂါ, hypochondriasis (များ၏ပျံ့နှံ့ကြောင်းတွေ့ရှိရColeman, 1991; Jenike, 1989), သိသိသာသာ CSBD နှင့်အတူ OCD လူနာခြီးမွှောကျခဲ့သညျ။ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးနှင့်အတူအဆက်မပြတ်နှင့်အတူပုံမှန်အားပစ္စုပ္ပန် hypochondriasis နှင့်အတူလူနာ (Salkovskis & Warwick, 1986) ။ hypochondriasis ထံမှခံရသူကိုမကြာခဏလိင်ဆက်ဆံသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အတူသူများသည်အထူးသဖြင့်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အဖြစ်ဟာသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသိ၏အန္တရာယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အမူအကျင့် "၏-ထိန်းချုပ်မှုထွက်" သို့မဟုတ်သာမန်နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိမရှိမေးခွန်းနှင့်အတူသာအာရုံစိုနိုင်ပါသည်။
ဤလေ့လာမှုအများအပြားန့်အသတ်အလေးပေးရထိုက်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာဒီလေ့လာမှုကိုသာအဘယ်သူမျှမ OCD နှင့်အတူ CSBD လူနာတစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုခြင်းမရှိဘဲ OCD လူနာပါဝင်သည်။ OCD အတွက် CSBD အပေါ်တွေ့ရှိချက်များထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေး warranting အခြားရောဂါရှာဖွေအလိုက်မှယဘေုယမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ပြင်ဤသင်တန်းသားများကို CSBD များအတွက်ကုသမှုမရှာနှင့်ကဲ့သို့သော CSBD အတူဆေးခန်းမှတင်ပြသည့်ပုံမှန်လူဦးရေမဖွစျနိုငျသညျ။ CSBD ၏ psychopathology အမျိုးသမီးတွေနှိုင်းယှဉ်အမျိုးသားများတွင်ကွာခြားနိုင်ပေမယ့်အပြင်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ CSBD စံကျေပွန်တစ်ဦးချင်းစီ၏အတော်လေးနိမ့်အရေအတွက်ကျနော်တို့နောက်ထပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်ကျားမအားဖြင့်ဆောင်များတွင်ခွဲခြားမရခဲ့ပေ။ ငါတို့သည်လည်း CSBD စံနှင့်ဤလေ့လာမှု၏ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးသဘောသဘာဝဖြည့်ဆည်းတစ်ဦးချင်းစီ၏အနိမ့်အရေအတွက်ကြောင့်အများအပြားနှိုင်းယှဉ်ဘို့အပြင်ပေးမပေးခဲ့ပါဘူး။
CSBD ကို SCID-OCSD သုံး၍ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤကိရိယာသည် ICD-11 ရှိ CSBD ၏အဓိကရောဂါရှာဖွေရေးလမ်းညွှန်ချက်များကိုအကဲဖြတ်သည်။ (“ နည်းလမ်းများ” အပိုင်းကိုကြည့်ပါ) သို့သော် ICD-11 ၏လက်တွေ့ဖော်ပြချက်များနှင့် Diagnostic Guidelines မူကွဲတို့တွင်အလွန်အမင်းစိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုဆေးခန်းသမားများအားကူညီရန် (ဥပမာ - နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိပုံမှန်စံသတ်မှတ်ချက်အပိုင်း) တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တူရိယာထိုကဲ့သို့သောနယ်နိမိတ်အပိုင်းချို့တဲ့ခဲ့သည်။
CL နှင့် DJS ရန်ပုံငွေရယူလေ့လာမှုဒီဇိုင်း, ကြီးကြပ်ခြင်း, လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပြင်ဆင်မှုကြီးကြပ်။ JF စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ JF နှင့် PB လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပထမမူကြမ်းကရေးသားခဲ့သည်။ အားလုံးစာရေးဆရာများသိသိသာသာလေ့လာမှု၏အယူအဆရေးရာဒီဇိုင်းနှင့်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းလှူဒါန်းခဲ့သည်။ သူတို့ကလေ့လာမှုမှာအားလုံး data ကိုအပြည့်အဝသုံးစွဲနိုင်ခဲ့များနှင့်ဒေတာများ၏သမာဓိနှင့်ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုများအတွက်တာဝန်ယူပါ။
အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံး [ယား] ။ (2000) ။ စိတ်ရောဂါ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ (4th ed ။, စာသား Rev ။ ) ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: American Psychiatric Association. Google Scholar
Benazzi, F. (2001).4ရက်ပေါင်းစိတ်ကြွ II ကိုရောဂါအတွက် hypomania ၏နိမ့်ဆုံးကြာချိန်လား? စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်လက်တွေ့အာရုံကြောသိပ္ပံ, 251 (1) ၏ဥရောပမော်ကွန်း, 32-34။ Doi:https://doi.org/10.1007/s004060170065 Crossref, Medline, Google Scholar
အနက်ရောင်, W. ဒဗလျူ (2000). အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ရောဂါနှင့် phenomenology။ CNS Spectrum,5(1), 26-72။ Doi:https://doi.org/10.1017/S1092852900012645 Crossref, Medline, Google Scholar
အနက်ရောင်, W. ဒဗလျူ, Kehrberg, အယ်လ်အယ်လ်, Flumerfelt, D. L., & Schlosser, အက်စ်အက်စ် (1997). အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသတင်းပို့ 36 ဘာသာရပ်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, 154 ၏အမေရိကန်ဂျာနယ် (2), 243-249။ Doi:https://doi.org/10.1176/ajp.154.2.243 Crossref, Medline, Google Scholar
နှစ်ဦးစလုံး, B., Bartók, R., Tóth-Király, I., ရိဒ်, R. C., Griffiths က, အမ် D., Demetrovics, Z., & Orosz, G. (2018). Hypersexuality, ကျား, မ, နှင့်လိင်တိမ်းညွတ်: တစ်ဦးကအကြီးစား psychometric စစ်တမ်းလေ့လာမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, 47 (8) ၏မော်ကွန်း, 2265-2276။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-018-1201-z Crossref, Medline, Google Scholar
နှစ်ဦးစလုံး, B., Tóth-Király, I., Potenza, အမ် N., Griffiths က, အမ် D., Orosz, G., & Demetrovics, Z. (2018). ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက် Impulse နှင့် compulsive ၏အခန်းကဏ္ဍကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးရန်။ အဆိုပါလိင်သုတေသနဂျာနယ်, 56 (2), 166-179။ Doi:https://doi.org/10.1080/00224499.2018.1480744 Crossref, Medline, Google Scholar
Carnes, P. (1983) ။ မှောင်မိုက်အရိပ်ထဲက: နားလည်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ။ Minneapolis, MI: CompCare ထုတ်ဝေသူ. Google Scholar
Carnes, P. (1991) ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကမခေါ်ပါနဲ့: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲကနေဆယ်။ နယူးယောက်, နယူးယော့: Bantam. Google Scholar
Coleman, E. (1991). compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ စိတ်ပညာ & လူ့လိင်ဂျာနယ်,4(2), 37-52။ Doi:https://doi.org/10.1300/J056v04n02_04 Crossref, Google Scholar
Coleman, E. (1992). အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကနေသင့်ရဲ့စိတ်ရှည်ဆငျးရဲဒုက်ခလား? စိတ်ရောဂါရာဇဝင်, 22 (6), 320-325။ Doi:https://doi.org/10.3928/0048-5713-19920601-09 Crossref, Google Scholar
က de Tubino Scanavino, M., Ventuneac, A., Abdo, C. အိပ်ချ် N., Tavares, H., Amar ပြု MLSA, Messina, B., dos Reis, အက်စ်စီ, Martins, ဂျေပီ, & Parsons, ဂျေတီ (2013). ဆောပိုလို, ဘရာဇီးအတွက်ကုသမှု-ရှာကြံလူတို့တွင် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် psychopathology။ စိတ်ရောဂါကုသမှုသုတေသန 209 (3), 518-524။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.psychres.2013.01.021 Crossref, Medline, Google Scholar
Derbyshire, ကေအယ်လ်, & Grant က, ဂျေအီး (2015). compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: စာပေ၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်,4(2), 37-43။ Doi:https://doi.org/10.1556/2006.4.2015.003 လင့်ခ်, Google Scholar
Dickenson, JAGN, Coleman, E., & မိုင်းလုပ်သား, အမ်အိပ်ချ် (2018). အခက်အခဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌သွေးသားဆန္ဒရမ္မက်, ခံစားခကျြမြားနှငျ့အပြုအမူတွေကိုထိန်းချုပ်နဲ့ဆက်စပ်ရောက်သောပျံ့နှံ့။ ဂျေအေအမ်အေကွန်ယက်ဖွင့်ပါ, 1 (7), e184468။ Doi:https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2018.4468 Crossref, Medline, Google Scholar
du Toit, P. L., ဗန် Kradenburg, J., Niehaus, D., & Stein, J. ဂျေ (2001). စနစ်တကျလက်တွေ့အင်တာဗျူးကို အသုံးပြု. comorbid putative obsessive-compulsive spectrum ကိုမမှန်နှင့်မရှိဘဲစိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါလူနာများ၏နှိုင်းယှဉ်။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု, 42 (4), 291-300။ Doi:https://doi.org/10.1053/comp.2001.24586 Crossref, Medline, Google Scholar
ပထမဦးစွာ အမ်ခ, Spitzer, R. L., Gobbon, M., & ဝီလျံ, ဂျေခဒဗလျူ (1998) ။ DSM-IV ဝင်ရိုးတန်းငါမမှန်-လူနာထုတ်ဝေများအတွက်စနစ်တကျလက်တွေ့အင်တာဗျူး (SCID-I / P ကို, ဗားရှင်း 2.0, 8 / 98 တည်းဖြတ်မူ) ။ နယူးယောက်, နယူးယော့: နယူးယောက်ပြည်နယ်စိတ်ရောဂါ Institute မှ, biometric သုတေသနဦးစီးဌာန. Google Scholar
Folkman, S., Chesney, အမ်အေ, Pollack, L., & Phillips က, C. (1992). စိတ်ဖိစီးမှု, ဖြေရှင်းခြင်း, မြင့်မားသောအန္တရာယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ ကနျြးမာရေးစိတ်ပညာ, 11 (4), 218-222။ Doi:https://doi.org/10.1037/0278-6133.11.4.218 Crossref, Medline, Google Scholar
ပျော့သွားတာကို, J., Lemay, K., Stein, J. ဂျေ, Briken, P., Jakob, R., ရိဒ်, G. အမ်, & Kogan, C. S. (2019). စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်စပ်သော ICD-11 အခန်းကြီးအပေါ်ပြည်သူ့သက်ဆိုင်သူများ '' မှတ်ချက်များ။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု, 18, 2။ Doi:https://doi.org/10.1002/wps.20635 Crossref, Google Scholar
Gola, M., & Potenza, အမ် N. (2018). ပညာရေး၊ ခွဲခြားခြင်း၊ ကုသခြင်းနှင့်မူဝါဒဆိုင်ရာအစပျိုးခြင်းများကိုတိုးမြှင့်ခြင်း - မှတ်ချက် - ICD-11 ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာပြdisနာများ (Kraus et al ။ , 2018)။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်,7(2), 208-210။ Doi:https://doi.org/10.1556/2006.7.2018.51 လင့်ခ်, Google Scholar
လူကောင်း, ဒဗလျူကေ, စျေးနှုန်း, အယ်လ်အိပ်ချ်, Rasmussen, အက်စ်အေ, Mazure, C., Delgado, P., Heninger, G. အ R., & Charney, S. အက်စ် (1989). အဆိုပါယေးလ်-Brown က obsessive compulsive စကေး။ II ကို။ တရားဝင်မှု။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု, 46 (11) ၏မော်ကွန်း, 1012-1016။ Doi:https://doi.org/10.1001/archpsyc.1989.01810110054008 Crossref, Medline, Google Scholar
လူကောင်း, ဒဗလျူကေ, စျေးနှုန်း, အယ်လ်အိပ်ချ်, Rasmussen, အက်စ်အေ, Mazure, C., Fleischmann, R. L., ဟေးလ်, C. L., Heninger, G. အ R., & Charney, S. အက်စ် (1989). အဆိုပါယေးလ်-Brown က obsessive compulsive စကေး။ ဗြဲဖွံ့ဖြိုးရေး, အသုံးပြုခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု, 46 (11) ၏မော်ကွန်း, 1006-1011။ Doi:https://doi.org/10.1001/archpsyc.1989.01810110048007 Crossref, Medline, Google Scholar
Grant က, ဂျေအီး, Atmaca, M., Fineberg, N. A., Fontenelle, အယ်လ်အက်ဖ်, Matsunaga, H., Reddy Y. C. ဂျေ, Simpson, အိပ်ချ်ခ, Thomsen, P. H., ဗန်တွင်း Heuvel, O. A., နွားငယ်သား, D., ဝုဒ်, W. ဒဗလျူ, & Stein, J. ဂျေ (2014). အဆိုပါ ICD-11 အတွက် Impulse ထိန်းချုပ်မှုမမှန်နှင့် "အမူအကျင့်စွဲလမ်း"။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု, 13 (2), 125-127။ Doi:https://doi.org/10.1002/wps.20115 Crossref, Medline, Google Scholar
Grant က, ဂျေအီး, Levine, L., Kim က, D., & Potenza, အမ် N. (2005). အရွယ်ရောက်ပြီးသူစိတ်ရောဂါအတွင်းလူနာအတွက် Impulse ထိန်းချုပ်မှုမမှန်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 162 (11), 2184-2188။ Doi:https://doi.org/10.1176/appi.ajp.162.11.2184 Crossref, Medline, Google Scholar
Griffiths က, အမ် D. (2016). အဆိုပါအင်တာနက်သက်ရောက်မှုများနှင့်အခြားကိစ္စများ: တစ်အပြုအမူစွဲအဖြစ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ စွဲ, 111 (12), 2107-2108။ Doi:https://doi.org/10.1111/add.13315 Crossref, Medline, Google Scholar
Jaisoorya, တီအက်စ်, Reddy Y. J., & Srinath, S. (2003). putative spectrum ကိုမမှန်ဖို့ obsessive-compulsive ရောဂါ၏ဆက်ဆံရေး: အိန္ဒိယလေ့လာမှုကနေရလဒ်များ။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု, 44 (4), 317-323။ Doi:https://doi.org/10.1016/S0010-440X(03)00084-1 Crossref, Medline, Google Scholar
Jenike, အမ်အေ (1989). compulsive-obsessive နှင့်ဆက်စပ်ရောဂါများ: တစ်ဦးကဝှက်ထားသောကပ်ရောဂါ။ ဆေးပညာ၏နယူးအင်္ဂလန်ဂျာနယ်, 321 (8), 539-541။ Doi:https://doi.org/10.1056/NEJM198908243210811 Crossref, Medline, Google Scholar
Judd, အယ်လ်အယ်လ်, & Akiskal, အိပ်ချ်အက်စ် (2003). အမေရိကန်လူဦးရေအတွက်စိတ်ကြွရောင်စဉ်ပုံမမှန်ခြင်း၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်မသန်စွမ်း: Re-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကောင့် subthreshold အမှုပေါင်းသို့ယူသည့် ECA ဒေတာဘေ့စများ။ အကျိုးသက်ရောက်စေ Disorders ၏ဂျာနယ်, 73 (1-2), 123-131။ Doi:https://doi.org/10.1016/S0165-0327(02)00332-4 Crossref, Medline, Google Scholar
Kafka, အမ်ပီ (2014). hypersexual ရောဂါမှဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, 43 (7) ၏မော်ကွန်း, 1259-1261။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-014-0326-y Crossref, Medline, Google Scholar
Klein, V., Briken, P., Schröder, J., & ပျော့သွားတာကို, J. (စာနယ်ဇင်းအတွက်) ။ စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များ '' compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ရောဂါဗေဒ: Do client များ '' ကျားမနှင့်လိင်တိမ်းညွတ်ကိစ္စ? ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ Google Scholar
Klein, V., Rettenberger, M., & Briken, P. (2014). self-အစီရင်ခံ hypersexuality ၏ညွှန်းကိန်းများနှင့်အမျိုးသမီးအွန်လိုင်းနမူနာ၎င်း၏ဆက်စပ်မှု။ အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 11 (8), 1974-1981။ Doi:https://doi.org/10.1111/jsm.12602 Crossref, Medline, Google Scholar
Kraus, အက်စ်ဒဗလျူ, Krueger, R. ခ, Briken, P., ပထမဦးစွာ အမ်ခ, Stein, J. ဂျေ, Kaplan, ဒေါ်။, Voon, V., Abdo, C. အိပ်ချ် N., Grant က, ဂျေအီး, Atalla, E., & ရိဒ်, G. အမ် (2018). အဆိုပါ ICD-11 အတွက် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု, 17 (1), 109-110။ Doi:https://doi.org/10.1002/wps.20499 Crossref, Medline, Google Scholar
Kraus, အက်စ်ဒဗလျူ, Voon, V., & Potenza, အမ် N. (2016). တစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ compulsive သငျ့သလော စွဲ, 111 (12), 2097-2106။ Doi:https://doi.org/10.1111/add.13297 Crossref, Medline, Google Scholar
Langstrom, N., & Hanson, R. K. (2006). အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အမြင့်နှုန်းထားများ: ဆက်စပ်မှုနှင့်ခန့်မှန်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, 35 (1) ၏မော်ကွန်း, 37-52။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-006-8993-y Crossref, Medline, Google Scholar
Morgenstern, J., Muench, F., O'Leary, A., Wainberg, M., Parsons, ဂျေတီ, ဟော်လန်, E., လိန်း, L., & Irwin, T. (2011). လိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျားအတွက် non-paraphilic compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်စိတ်ရောဂါပူးတွဲရောဂါ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်မသမာမှု၊ ၂၁ (၄)၊ 114-134။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720162.2011.593420 Crossref, Google Scholar
Odlaug, ခအယ်လ်, တပ်မက်သောစိတ်, K., Schreiber, အယ်လ် R., Christenson, G., Derbyshire, K., Harvanko, A., ရွှေ, D., & Grant က, ဂျေအီး (2013). ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ လက်တွေ့စိတ်ရောဂါကုသမှု, 25 (3) ၏ရာဇဝင်, 193-200. Medline, Google Scholar
ပေါလုက, D. L., Leckman, ဂျေအက်ဖ်, Towbin, ကေအီး, Zahner, ဂျီအီး, & Cohen ကို, J. ဂျေ (1986). တစ်ဦးကဖြစ်နိုင်သမျှမျိုးရိုးဗီဇကြားဆက်ဆံရေး Tourette ရဲ့ syndrome ရောဂါနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါအကြားတည်ရှိ။ Psychopharmacology သတင်းလွှာ, 22 (3), 730-733. Medline, Google Scholar
ပေါလုက, D. L., Towbin, ကေအီး, Leckman, ဂျေအက်ဖ်, Zahner, ဂျီအီး, & Cohen ကို, J. ဂျေ (1986). Gilles de la Tourette ရဲ့ syndrome ရောဂါနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါ: အထောက်အထားတစ်ခုမျိုးရိုးဗီဇကြားဆက်ဆံရေး supporting။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု, 43 (12) ၏မော်ကွန်း, 1180-1182။ Doi:https://doi.org/10.1001/archpsyc.1986.01800120066013 Crossref, Medline, Google Scholar
Potenza, အမ် N., Gola, M., Voon, V., Kor, A., & Kraus, အက်စ်ဒဗလျူ (2017). အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုစွဲလမ်းဖရိုဖရဲဖြစ်သနည်း ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet စိတ်ရောဂါကုသမှု,4(9), 663-664။ Doi:https://doi.org/10.1016/S2215-0366(17)30316-4 Crossref, Medline, Google Scholar
Salkovskis, P. အမ်, & Warwick, အိပ်ချ်အမ် (1986). စိုးအတွက်အဆက်မပြတ်, ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အာမခံ: hypochondriasis မှတစ်ဦးကသိမြင်မှု-အပြုအမူချဉ်းကပ်။ အပြုအမူသုတေသနနှင့်ကုထုံး, 24 (5), 597-602။ Doi:https://doi.org/10.1016/0005-7967(86)90041-0 Crossref, Medline, Google Scholar
Skegg, K., Nada-Raja, S., Dickson, N., & ပေါလုက, C. (2010). အဆိုပါဒန်နီးဒင် Multidisciplinary ကနျြးမာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီလေ့လာမှုကနေငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးဆောင်များတွင်အတွက်ရိပ်မိ "ထိန်းချုပ်မှုထဲက" လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, 39 (4) ၏မော်ကွန်း, 968-978။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-009-9504-8 Crossref, Medline, Google Scholar
Smith က P. H., Potenza, အမ် N., Mazure, စင်တီမီတာ။, McKee, အက်စ်အေ, ပန်းခြံ, C. L., & Hoff, R. အေ (2014). အထီးစစ်ရေးစစ်ပြန်ကြားတွင် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လက်တွေ့အချက်များ။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်,3(4), 214-222။ Doi:https://doi.org/10.1556/JBA.3.2014.4.2 လင့်ခ်, Google Scholar
Stein, J. ဂျေ (2008). compulsive, ထကြွလွယ်သော, နှင့်စွဲလမ်းမော်ဒယ်များ: hypersexual မမှန်ခွဲခြား။ မြောက်အမေရိက, 31 (4) ၏စိတ်ရောဂါဆေးခန်း, 587-591။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.psc.2008.06.007 Crossref, Medline, Google Scholar
Stein, J. ဂျေ, အနက်ရောင်, W. ဒဗလျူ, & Pienaar, W. (2000). လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမမှန်မဟုတ်ရင်မသတ်မှတ်ထားပါ: compulsive, စွဲလမ်း, ဒါမှမဟုတ်ထကြွလွယ်သော? CNS Spectrum,5(1), 60-66။ Doi:https://doi.org/10.1017/S1092852900012670 Crossref, Medline, Google Scholar
Stein, J. ဂျေ, ဟူဂို, F., Oosthuizen, P., Hawkridge, အက်စ်အမ်, & ဗန် Heerden, B. (2000). hypersexuality ၏ Neuropsychiatry။ CNS Spectrum,5(1), 36-46။ Doi:https://doi.org/10.1017/S1092852900012657 Crossref, Medline, Google Scholar
Swain, ဂျေအီး, Scahill, L., Lombroso, ပီဂျေ, ရှင်ဘုရင်က, R. အေ, & Leckman, ဂျေအက်ဖ် (2007). Tourette syndrome ရောဂါနှင့်နေကြပါပြီမမှန်: တိုးတက်မှု၏တစ်ဦးကဆယ်စုနှစ်။ အမေရိကန်ကလေးသူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ရောဂါကုသရေးအကယ်ဒမီဂျာနယ်၊ ၄၆ (၈)၊ 947-968။ Doi:https://doi.org/10.1097/chi.0b013e318068fbcc Crossref, Medline, Google Scholar